SEO बनाम पीपीसी - उत्तम मार्केटिंग रणनीति कुन हो? Semalt जवाफ दिन्छ
जब यो फेला पर्न आउँदछ, तपाईंसँग फ्रि मार्केटिंग मापनमा दुई विकल्पहरू छन्।
विकल्प संख्या एक प्रति क्लिक भुक्तान वा छ पीपीसी। पीपीसी तब हुन्छ जब तपाईंले जानाजानी खोजी ईन्जिनको नतिजा पृष्ठको शीर्षमा जानका लागि पैसा तिर्नुहुन्छ (SERP) यसको तत्काल परिणामहरू छन्, तर के यसले दीर्घकालीन रणनीतिको रूपमा काम गर्न सक्दछ?
दोस्रो विकल्प छ SEO वा खोज इञ्जिन अनुकूलन। एसईओ तब हुन्छ जब तपाईं आफ्नो वेबसाइट बनाउनुहुन्छ SERP को शीर्षमा पुग्न। यो मार्केटिंगमा दीर्घकालीन फोकस हो जुन तपाइँको वेबसाइटको प्राधिकरणबाट आउँदछ। तर तपाईंलाई कत्तिको उपयोगी छ जब तपाईंलाई द्रुत रूपान्तरण चाहिन्छ?
त्यसोभए एसईओ र पीपीसी बीचको लडाईमा कुन मार्केटिंग सबैभन्दा राम्रो रणनीति हो? छोटो उत्तर तपाईंको व्यवसायको लक्ष्यमा निर्भर गर्दछ। उच्च स्तरको लगानीको साथ पीपीसीको तत्काल प्रतिक्रिया छ। साना व्यवसायका लागि, केहि अभियानहरू प्रति दिन $ १०० भन्दा बढी खर्च गर्न सक्दछन्।
एसईओ सामूहिक दर्शक निर्माणको लागि उत्कृष्ट छ तर मुद्दाहरूमा चल्छ जब यो छोटो अवधिको आयको लागि आउँदछ। तल, हामी दुबै विकल्पहरूमा विवरणहरूमा जान्छौं।
पीपीसी छनौट गर्न तीन कारणहरू
मान्छे हो पचास प्रतिशत पीपीसी विज्ञापनमा क्लिक गर्दा केहि खरीद गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ। जब यो सफल विज्ञापनको लागि आउँदछ, पीपीसीले तपाइँको वेबसाइटको लागि रूपान्तरणको एक उच्च मात्रा पैदा गर्न सक्दछ।
तर यदि तपाईं सुरुको चरणमा हुनुहुन्छ भने के हुन्छ? पीपीसी एक अधिकार को रूपमा एक वेबसाइट निर्माण गर्न को रूप मा प्रभावी हुन सक्दैन। जब पीपीसी अभियान समाप्त हुन्छ, त्यस्तै भयो।
तल, हामी बिभिन्न कारणहरूको एक छोटो सूचिमा जानेछौं जुन तपाईं पीपीसी अभियानको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ।
तपाईंको दर्शक अविश्वसनीय रूप बाट संकुचित छ
२०० In मा, एलेक ब्राउनस्टीनको नामबाट एक शानदार प्रतिलिपि लेखकले एक खरीद गर्यो विज्ञापन अभियान उसको सपनाको जागिरमा कार्यकारीको नाम लक्षित गर्दै। दिइएको छ कि व्यक्तिहरू आफै गुगलमा जान्छन्, वा तिनीहरूको नामको लागि गुगल अलर्ट स्थापना गर्दछ, लक्ष्यले अन्ततः यसको छाप छोड्दछ। अन्तमा, श्री ब्राउनस्टेनलाई उनको सपनाको जागिरमा राखियो, जुन उसले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्यो।
एक सानो व्यवसाय मालिक को रूप मा, यो तपाइँ तपाइँको व्यापार लक्ष्य थाहा मा निर्भर छ। जब तपाईं आफ्नो उपभोक्तालाई चिन्नुहुन्छ, तपाईं तिनीहरूलाई धेरै प्रभावकारी रूपमा लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। यो दुबै मामला हो जब यो तिनीहरूको लक्ष्यहरू जान्ने आउँछ। यो तपाईं अधिक सजीलो संग आफैलाई पign्क्तिबद्ध गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईं तिनीहरूको लक्ष्यहरूको प्रश्नको द्रुत जवाफ दिन सक्नुहुन्न भने, यो कुराकानीको लागि समय हुन सक्छ।
तपाईंसँग एक विशिष्ट, एकल-गन्तव्य लक्ष्य छ
"बीपी" नाम सँधै सकारात्मक प्रतिक्रियाको साथ आउँदैन। तिनीहरू धेरै जसो "बीपी तेल स्पिल" को रूपमा चिनिने २०१० पराजयका लागि परिचित छन्। यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्न, बीपीले किवर्ड खरीद गर्‍यो "तेल पोख्नु।"
खरीदको परिणाम स्वरूप उनीहरूले यसलाई जवाफ दिन सक्दछन् जसले यो खोजी गर्न सक्दछन्। जब यो एक PR प्रकोप थियो, बीपीले यस विशेष कुञ्जी शब्दलाई लक्षित गर्न राम्रो गर्‍यो। यद्यपि यो पूर्ण सफलता भन्न सकिदैन किनकि तिनीहरूको कम्पनी यस मुद्दाको लागि पूर्ण रूपमा गल्ती थियो।
यस कथाले हामीलाई पीपीसीको अनुपम पाठ दिन्छ। आफ्नो लक्ष्य मा धेरै विशिष्ट हुनुहोस्। यदि तपाइँसँग तपाइँको पीपीसीको अन्त्यमा रोक्नको लागि एकल गन्तव्य छ भने, यो प्रभावी हुन सक्ने सम्भावना बढी छ।
यदि तपाईंको लक्ष्य बिक्री रूपान्तरण हो
यस उदाहरणको लागि, हामी हाम्रो ध्यान युट्यूबमा स्विच गरिरहेका छौं। पुरानो दिनमा, विज्ञापनदाताहरूको लागि यूट्यूब विज्ञापन उनीहरूको लागि काम गर्ने एक तरीका पत्ता लगाउन गाह्रो थियो। परफ्यूम शप र नेट मिडिया प्लानेट (NMPi) ले यसलाई चुनौतीको रूपमा लिए।
अन्ततः, YouTube ले एक अधिक प्रभावी लक्ष्यीकरण प्लेटफर्म बढ्यो जसले विज्ञापनदाताहरूलाई विशेष भिडियोमा फोकस गर्न अनुमति दिन्छ। यसको नतिजाको रूपमा, NMPi ले 100 प्रतिशत प्रासंगिकताका साथ भिडियोहरूलाई लक्षित गर्न सक्दछ। समान सेलिब्रिटीका भिडियोहरूमा सेलिब्रेटी अत्तरहरूलाई लक्ष्य गरेर सफलता सफल भयो। यो रणनीति लगभग एक मा परिणामस्वरूप लगानीमा २0० प्रतिशत वापसी (आरओआई)।
यस कथाले हामीलाई भन्छ कि पीपीसी बिक्रीमा अविश्वसनीय उपयोगी हुन सक्छ। यो एक विशिष्ट लक्ष्य हो जुन मानिसहरूलाई उनीहरूले चाहेको दिशामा पुर्‍याउँछन्। उदाहरण को लागी, यदि कसैले तपाइँको शहर मा क्याम्पिंग आपूर्ति को लागी खोज रहे छ, तपाइँ को लागी एक विशेष खोजशब्द लक्षित गर्न को लागी उनीहरुलाई आकर्षित गर्न को लागी। यो रणनीति एक बिक्री मा एक उच्च तत्काल सम्भावना को परिणाम।
एसईओ छनौट गर्न तीन कारणहरू
SEO एक मायालु प्रणाली देखिन्छ। यदि तपाईं व्यक्तिलाई तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ भने, किन तपाईं तिनीहरूको आगमनको लागि भुक्तान गर्नुहुन्न? यस प्रश्नको उत्तर दुई क्षेत्रहरुमा आउँछ।
पहिलो, पीपीसी एक खर्च छ कि छिटो जोड्ने झुकाव छ। यदि तपाइँ प्रतिस्पर्धी रहन चाहानुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको क्षेत्र मा अरूले समान दर खर्च गर्न चाहानुहुन्छ। आउटस्पेंड हुनुको मतलब अन्य व्यक्तिले तपाईं भन्दा अधिक क्लिकहरू प्राप्त गर्दछन्। नतिजाको रूपमा, पीपीसी बिडिंग वार हुन्छ, जुन गुगलको लागि ठूलो छ।
दोस्रो, पीपीसी छोटो अवधि का लक्ष्यहरु को लागी राम्रो काम गर्दछ। यदि तपाइँ बिक्री गर्न चाहानुहुन्छ र अरू केहि चाहनुहुन्न भने पीपीसी तपाइँको लागि उपयुक्त छ। केवल यकीन गर्नुहोस् कि तपाइँ खर्च खर्च गर्नुभयो।
दीर्घकालीन यातायात लगातार यी खोज इञ्जिनहरूको शीर्ष मा हिटेर आउँछ। तपाईं त्यसो गर्न सक्नुहुन्न यदि यदि गुगललाई तपाईंको लागि यो भुक्तानी गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले रणनीति बनाउनु पर्छ जुन तपाईंलाई सजिलै देख्न सजिलो बनाउँदछ। यस ज्ञानलाई दिमागमा राखेर हामी तलका एसईओ छनौट गर्न केही कारणहरू सूचीबद्ध गर्दछौं।
तपाइँ नियमित दर्शक निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ
धेरै समय अगाडि मेरो साथीले छोटो अवधिको अभियानमा उनीहरूको ब्लगको विज्ञापन गर्थे। पहिलो हप्ताको लागि, ब्लगले धेरै संख्यामा आगन्तुकहरूको घमण्ड गर्न सके र उही स्थानमा अन्य ब्लगहरूलाई पुर्‍यायो। पीपीसीको पैसा सकिएपछि मानिसहरू आउन छाडे।
यो मुद्दा महत्वाकांक्षी ब्लगरको असंगत पोष्टिंग तालिकासँग सम्बन्धित थियो। तिनीहरू जहाँसुकै पनि प्रति हप्ता तीन देखि शून्य पटक पोष्ट गर्दछन्। मानिसहरूले त्यहाँ केही लेखहरू पढे र त्यसमा अघि बढ्ने निर्णय गरे।
साथै, हामीसँग परिष्कृत लक्षित एल्गोरिथ्मको अभाव थियो जुन त्यतिखेर मानिसहरू चाहन्थे। यो ब्लग एक "गेमि blog ब्लग" हो, त्यसैले उसले १ in देखि age० वर्ष उमेरका पुरुषहरूलाई लक्षित गर्‍यो जसले विषयमा रुचि राख्यो। तिनीहरू "लक्षित" चाहँदैनन् भनेर विशेष समस्याहरू खोजिरहेका हुन सक्दछन्।
एसईओ ले तपाईंलाई सम्पूर्ण प्रश्नहरू र कीवर्डहरू लक्षित गर्न अनुमति दिन्छ तपाईंको दर्शकहरूको इच्छाको साथ पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस्। र, पैसा हराउँदा तिनीहरू हराउँदैनन्। तपाईंको दर्शकसँग व्यक्ति छन् जो तपाईंको सामग्री खोजी गर्दैछन्।
जानकारीको एक निरन्तर आधार सिर्जना गर्न
यदि तपाइँ Semalt ब्लगमा हेर्नुभयो भने, तपाईं याद गर्नुहुनेछ कि SEO र PPC विषय खोजी गरिएको छ पहिले। एउटा चीज जुन तपाईले ब्लगको अन्वेषण गर्नुहुन्छ देख्नु हुने विभिन्न विषयहरू सम्बन्धित छन्। तपाईं बाट केहि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ SEO को आधारभूत मार्केटिंग को समयमा मन्दी समय।
तपाईंले यो रणनीति अन्य महत्वपूर्ण बजारहरू र ब्लगरहरूमा पनि पाउनुहुनेछ। यसमा नील पटेल, हब्स्पट, अहरेफ्स, र बज्सुमो छन्। यी व्यक्तिसँग धेरै उपयोगी जानकारी छ जुन तपाईंलाई भुक्तान गरिएको पुस्तकको रूपमा आउन सक्दछ। त्यसोभए किन तिनीहरू नि: शुल्क दिन्छन्?
मार्केटिंग दृष्टिकोणबाट, नि: शुल्क सामग्रीले तपाईंको भुक्तान गरिएको सामग्री हेर्नको लागि मानिसहरूलाई ल्याउँदछ। यदि तपाईं सित्तैमा सामानहरू दिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूले तपाईंको भुक्तान गरिएको मार्केटिंग रणनीतिहरू हेर्न जारी राख्नेछन्। अन्तत :, तिनीहरूले तपाइँको उत्पादन किन्न सक्छ।
दोस्रो कारण यो हो कि अधिक व्यक्तिहरूले अधिक सम्भावित ब्याकलिks्कहरूको परिणाम दिन्छ। यी ब्याकलिंकहरूले तपाईंको वेबसाइट अधिकारको स्थानको रूपमा स्थापित गर्दछ। अरूलाई सहयोग गर्ने तपाईंको इच्छापूर्वक फैलाएर तपाईलाई भरोसायोग्यको रूपमा लिने सम्भावना बढी हुन्छ।
त्यसोभए तपाईं उच्च क्रममा जारी राख्न यो सामग्री नियमित रूपमा पुनः निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ
म्याट कट्स, पहिले गुगलको, बताइएको छ कि वेब सामग्रीको percent० प्रतिशत २०१ 2013 मा दोहोरिएको थियो। यो समस्या होईन, तर श्री कट्सले विस्तृत रूपमा जान्छ कि त्यसको मतलब केहि वेबसाइटको असंख्यको लागि समान चीजको लागि श्रेणीकरण गर्ने प्रयास गर्दै।
ती सबैलाई "क्लस्टर" मा राखेर गुगलले सूचनाहरू मार्फत क्रमबद्ध गर्दछ कि यी मध्ये कुन परिणामले उच्च अधिकार पाएको छ र पढ्न सजिलो छ। सूचीको शीर्षमा भेट्नेहरूसँग थप ब्याकलाइनहरू छन् र राम्ररी निर्माण गरिएको छ।
पुरानो सामग्रीमा यो जानकारी कसरी लागू हुन्छ?
यदि तपाईं कुनै पनि माध्यमबाट हेर्नुहुन्छ विश्लेषण उपकरण, तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईंको साइटसँग यसमा धेरै आन्तरिक लिंकहरू छन्। नतिजाको रूपमा, यो पहिले नै निर्मित छ तिनीहरूलाई राम्रो अधिकारको साथ उनीहरूलाई। जब तपाईं पुरानो सामग्री लाई पुन: जीवन्त गर्नुहुन्छ, तपाईं यसलाई लि links्क लिन सक्नुहुनेछ। तपाईंसँग गुगलको शीर्षमा पुग्ने धेरै संभावना छ।
त्यसैले तपाईंको उच्च प्रदर्शन सामग्रीमा ध्यान दिनुहोस्। आफैलाई यो प्रश्न गर्नुहोस् कि यो कसरी लागू हुन सक्छ आज। एकचोटि तपाईंसँग त्यो उत्तर छ, ती खण्डहरू पुनः निर्माण गर्नुहोस् ताकि तिनीहरू आधुनिक दर्शकहरूको लागि खोजयोग्य हुन सक्छन्।
एसईओ र पीपीसी तुलना गर्दा के राम्रो हुन्छ?
यी सबै उदाहरणका साथ टाईमा, यसले हामीलाई मूल प्रश्नमा फिर्ता ल्याउँदछ। के राम्रो छ: एसईओ वा पीपीसी? छोटो उत्तर: यो निर्भर गर्दछ।
पीपीसी छोटो अवधिको, अविश्वसनीय रूपमा विशेष लक्ष्यहरू राख्नेहरूको लागि उत्कृष्ट छ। यदि तपाइँले बिक्रीलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ भने, अविश्वसनीय रूपले संकुचित दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्नुहोस्, वा एउटा अविश्वसनीय विशेष उद्देश्य छ, पीपीसी अधिक उपयुक्त हुन सक्छ। यो एक तत्काल प्रतिक्रिया र एक उच्च संभावित रूपान्तरण दर मा परिणाम।
एसईओ दीर्घकालीन सूचना रणनीतिहरूको लागि उत्कृष्ट छ जुन तपाईंलाई र तपाईंको दर्शकलाई बढ्न मद्दतको लागि हो। उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्ने सामग्री उत्पादन गरेर, तिनीहरू नियमित आगन्तुक बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तिनीहरूले तपाइँको सेवा चाहँदैनन्, तर तिनीहरू तपाइँको सेवा चाहान्ने अरूलाई चिन्न सक्छन्।
लामो अवधिको योजनाको आवश्यकतालाई दिँदै, मेरो अन्तिम प्राथमिकता SEOमा आउँछ। पीपीसीबाट आएका धेरै आगन्तुकहरू कम रहन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। जब तपाईं सूचीको शीर्षमा जानको लागि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईंको आय तपाईंको मार्केटिंगभन्दा बढि छ। प्रत्येक मार्केटिंग टुक्राले आफैलाई २०० प्रतिशत आरओआईको साथ फेला पार्दैन।
जबकि SEO ले लामो खेल जित्न सक्छ, पीपीसी छोटो खेल जीत। जे होस्, यो सर्वोपरि हो कि तपाइँ एसईओ रणनीतिमा लगानी गर्नुहुन्छ। Semalt विचार गर्नुहोस्, जो तपाईलाई यस दीर्घकालीन रणनीतिको साथ सहयोग गर्ने क्षेत्रमा विशेषज्ञ छन्। सफलताको प्रमाणित ट्र्याक रेकर्डको साथ, ती तपाईंलाई गुगलको शीर्ष १० मा पुग्न सक्षम हुनेछन्। एक मा पुग्न SEO विशेषज्ञ आज